Osomabhizinisi bacotshelelwe ngolwazi | News24
Osomabhizinisi bacotshelelwe ngolwazi
PHOTO: precious gumede x
INATIONAL Empowerment Fund ukuwuhlaka lokuphucula osomabizinisi abamnyama ngaphansi komnyango wezokuhweba nezimboni (Department of Trade and Industry) ivakashele osomabhizini basoGwini ehholo lomphakathi eZG eGamalakhe ngoMsombuluko ntambama, ukuzobanika ulwazi ngamathuba osomabizinisi abanga bothula kuwona.
UPortia Mazibuko uchaze iNEF njengohlaka olusiza osomabizinisi abancane nabakhulu.
“Thina sisiza abantu abamnyama abafuna ukuziqalela amabhizinisi, abafuna ukukhululisa amabhizinisi kanye nabafuna ukuthenga amabhizinisi ezinkampanini ezinkulu ezifana namagaraji namafranchise afana noKFC. UMazibuko uthe kunemigomo elandelwayo kanye nezihlelo okumele osomabizinisi badlule kuzona ukuze bathole loluxhaso.
INEF ithe iqala ukuxhasa ngemali engu R250 000 kuya esigidini (R1 million).
Osomabizinisi abahambele lomhlangano bathola ukuba khona kwalomhlangano kube usizo kibona njengoba abaningi abebewuhambele kungabantu abanezifiso ezinkulu ngamabizinisi abo abebengazi ukuthi usizo bangaluthola kanjani.
Omunye wosomabizinisi abancane owakhona la Ogwini uKhethokuhle Mndebele ozidayiselayo uthe kumsize kakhulu ukuza kulomhlangano.
“Angikaze ngithole ithuba elifana naleli ukuthi kubekhona umnyango oza mathupha emphakathini omnyama uzobatshela ngezinsiza. Konke esikuthole kulomhlngano kuzoba usizo olukhulu kithina njengo somabizinisi abamnyama,” kubeka uMndebele.
UMazibuko uphinde waxoxela osomabizinisi ngamanye amaphrojekthi asebewasizile esifundazweni, nasePort Shepstone.
“La ePort Shepstone sisebenzisane nosomabhizinisi wegalaji i-Engen eliseshelly Beach, oweza kithina wacela usizo lwemali ukuthi athenge lefranchise, wayithola indawo wayithola imali. Esikubhekayo ukuthi ibhizinisi lakho lizosebenza nokuthi indawo oketha ukwenza kuyona ibhizinisi lakho iyalivumela yini,” kusho uMazibuko.
Uphinde wathi osomabhizinisi bangeza emnyangweni wabo ukuzothola ulwazi oluthe xaxa ngokonga imali kanye nokuthi bangayitshala kanjani imali.
Amanye amabhizinisi aqhubekayo kusona lesisifundazwe aphothule kuloluhlaka iMega City eseMlazi ehlanganise, Jozini Tiger lodge, kanye neTala game Reserve.
Omunye wabo ubuze ukuthi uma usebenzisana nomuntu kwi co-operation kanti yena unegama elibi kucredit bureau iNEF iyakwazi yini ukuthi inisize. Impendulo ayitholile ukuthi iNef iyakwazi ukusiza noma ungenawo ngisho utiki kepha unephupho ngebhizinisi elibonakalayo ukuthi lizoyingenisa imali.
“Uma inkampani noma usomabizinisi eBlacklistiwe siyakwazi ukuthi simusize uma kukhona imizamo ayenzanyo ukuthi alungise igamalakhe naleyo nkampani ayikwelethayo,” kusho Umazibuko.
Abanye osomabizinisi bacele amafomu emva komhlangano okubhalisela usizo ngamabizinisi abo